Iindaba - Isitovu se-Steam esine-French Glass Bowl "Si se xing ye" (Yindalo ukuthanda izinto ezilungileyo, mhlawumbi ukutya), ukuthanda ukutya kukuqhubeka okungafunekiyo koluntu kwasekuqaleni.
I-oyile yesitovu nge-French Glass Bowl "Si se xing ye" (Yindalo ukuthanda izinto ezilungileyo, mhlawumbi ukutya), ukuthanda ukutya kukuqhubeka okungapheliyo koluntu kwasekuqaleni.
I-oyile yesitovu nge-French Glass Bowl "Si se xing ye" (Yindalo ukuthanda izinto ezilungileyo, mhlawumbi ukutya), ukuthanda ukutya kukuqhubeka okungapheliyo koluntu kwasekuqaleni. Namhlanje, xa ubomi buya busanda, ukutya kwabantu, impahla yokunxiba nokutya kuye kwaguquka kakhulu. Iindidi zokutya zihlala zityebiswa. Iindlela ezahlukeneyo zokupheka ziye zongezwa kwinqanaba lokupheka gourmet, kuzisa amava amatsha kunoveli yabantu.
Nangona kunjalo, abantu bale mihla ngokungaboni ngokufuna ubumnandi, amaxesha amaninzi kakhulu ayongezwa kwinkqubo yokupheka ukutya. Ngokwezibalo, amaTshayina atya i-avareji ye-42.1g yeoyile ngosuku, ephantse iphindwe kabini kumgangatho wezempilo.
Ukutya okunamafutha aphezulu kuyingozi kangakanani?
I-cholesterol egqithisileyo kunye nenqatha iya kuqokelelana ezindongeni zemithambo yegazi, ibangele i-arteriosclerosis, ichaphazele ukusebenza kwengqondo, inyuse izehlo zesifo sentliziyo, isifo sentliziyo kunye nezinye izifo, kwaye ngaphezulu, ukwandisa kakhulu amathuba omhlaza womzimba. Ukutya kunye nempilo akunakuphoxeka. Ukusombulula le ngxaki, uSHAO HONG usungule uthotho lwee-oveni zokukhanya ezinengqiqo. Uthotho lwee-oveni zidibanisa ukubhaka, ukubhaka, ukubhaka, ukufudumeza, ukunyibilika, ukucoca kunye neminye imisebenzi yokuhlangabezana neemfuno zemihla ngemihla zekhitshi.
Isixhobo esisisiseko se-oveni yokubhaka, i-grill esezantsi ilungele ukugcoba amaphiko enkukhu, imilenze yenkukhu, iitshipsi zewundlu, intlanzi kunye nezinye inyama. Ukukhanya kwe-infrared ukukhanya kwe-360 ngesantya esiphezulu, ukutya okuvuthuzayo kwenyama yokutya, kunyanzelwa amanqatha amaninzi, inyama iyacwebezela, imnandi kwaye ayinamafutha. I-pizza ebhakwe, i-tarts yeqanda, iifriji zaseFrance, iitapile kunye nokunye ukutya okulula okuthandwayo, ishelufu ephantsi nayo iyimfuneko. I-grill ephezulu ihambelana ne "ring ring" ukubhaka ukutya okukhudlwana, njengenkukhu eyosiweyo.
Ukusebenza ngokukhawuleza, umgangatho ophezulu, ukukhawuleza ukupheka.
Kuthatha kuphela imizuzu engama-40 ukupheka inkukhu kwi-oveni ye-SHAO HONG, kwaye incasa ayiphazamiseki. Usebenzisa iliza lokukhanya eline-infrared 360-degree-high-speed isantya somoya ukubhaka ukutya, okukhawulezayo, okusebenzayo, kwaye kunokunyanzela igrisi yokutya kwenyama, kufanelekile ukuba ube nesixhobo sekhitshi sosapho ngalunye.
ISHAO HONG i-oveni yokubhaka, ekwabizwa ngokuba yi "air fryer", enye ifriji yomoya kwintengiso yentsimbi egalelwe ipani yesinyithi, kulula ukucutha izinto ezinetyhefu kubushushu obuphezulu, obangela ukonakala emzimbeni. I-oveni ye-SHAO HONG isebenzisa isiciko seglasi esingaphezulu nesicace gca. Ipani yokubhaka esetyenziswe kuthotho oluphezulu yipani yeglasi engeniswe eFrance, kwaye inelungelo lokuthengisa elikhethekileyo kwihlabathi liphela; ipani yokubhaka yothotho lwasemva kokuphela ikwenziwe ngezinto zasekhaya ze-A-grade.
Imowudi yokusebenza ye-SHAO HONG oven nayo yahlukile. Iphaneli yokusebenza koomatshini ilungele abantu abadala, kwaye uhlobo oluphambili lwesitshixo lulungele abantu abangamavila okanye zokupheka. Kukho uthotho, ekufuneka lusete "ixesha, ubushushu, isantya somoya" ngokweemeko zokutya. Le ilungele abantu abathanda ukupheka kwaye banobuchule ekuphekeni. Nangona kunjalo, i-SHAO HONG ineeresiphi zokubonelela, khetha nje ngokwemikhwa yobuqu. Nokuba yeyiphi indlela engenaxhala emva kokuthengisa!
Kuhlala kusithiwa ukutya kwe-aesthetic emhlabeni akunakuphoxeka. Ngelixa abantu bale mihla beqhubeka ngokungakhathali befuna ukutya okumnandi, bakwaqwalasele ngakumbi ukugcinwa kwempilo. Iqela lophando lwezesayensi i-SHAO HONG lihambelana nomgaqo "wokubonelela ngobomi obuphezulu obuphezulu kunye nobusempilweni" kwaye iyaqhubeka nokukhula kwindlela yokuvelisa izinto ezintsha. Sebenzisa ixesha lakho lokuzonwabisa ukonwabela amava obomi amatsha aziswa kukutya okusempilweni.